Xogta laga Old iPad wareejiyo hawada 2 ama iPad mini iPad 3
Tan iyo markii cusub iPad Air ayaa la sii daayay 22-, Oct, waxa uu noqonayaa mid Nicmada cusub oo kulul taageerayaasha Apple. Haddii aad iibsaday hawada iPad iyo haatan inaad aad u daallan oo ku saabsan suuqa kala iibsiga xogta laga jir iPad in hawada iPad, waxaad ka akhrisan kartaa this. Qaybta soo socda idin Toosiya saddex hab oo kala duwan oo ku saabsan sida laga soo jirkaan iPad wareejiyo hawada iPad.
Xalka 1: wareejinta xogta iPad jir ah u iPad hawada 2 la Lugood
Solution 2: xogta laga jir iPad dhaqaaq iPad hawada 2 adigoo isticmaalaya iCloud
Xalka 3; nuqul xog iPad jir ah u iPad hawada 2 la MobileTrans
Xalka 1: wareejinta xogta iPad jir ah u hawada iPad 2 / iPad mini 3 Lugood
Hubi in aad ku rakibtay nooca ugu dambeeya ee Lugood, oo abuurtaan.
Connect jir iPad in ay kombiyuutarka.
Riix hore iPad hoos AALADAHA galeeysid Lugood iyo dooran BACK Up Hadda .
Marka habka gurmad la soo gabagabeeyo, aad barkinta kartaa jir iPad iyo sii Lugood orodka
Connect hawada iPad in ay kombiyuutarka. Marka waxay u muuqataa hoos AALADAHA , waxa xaq-riix ka dibna dooro Soo Celinta kaabta ... .
Dooro cusub ee gurmad file oo guji soo celi .
Faa'iido: Lugood gurmad awoodo iyo soo celinta xogta ugu badan ee iPad (macruufka 9 taageeray) oo lacag la'aan ah. Xogta waxaa ka mid ah ku iibsaday songs, podcasts, buugaagta, barnaamijyadooda, sawiro iyo videos qaaday oo toogtay la iPad, xiriirada, fariimaha, wallpapers, xogta app iyo in ka badan.
Qasaarooyinka: Waa waqti lumis. Files Media synced ka computer ah looma oggola in la taageeray oo dib loo soo celiyo. Ka sokow, habka gurmad la guuldareystay laga yaabaa inuu ku soo bilowdo oo wax qalad ah waxay dhici kartaa in ay joojiso gurmad iyo soo celinta nidaamka bartamihii.
Xalka 2: dhaqaaq xogta laga jir iPad in iPad hawada 2 adigoo isticmaalaya iCloud
Fur hore iPad iyo shid shabakadaha WiFi.
Tubada Goobta iyo dedeg iCloud . Markaas, ka jaftaa Kaydinta & kaabta . Daar ee kaabta iCloud oo ka jaftaa OK . Markaas, ka jaftaa Back Up Hadda .
Ka dib markii ay gurmad la dhammeeyo, hubi markii ugu danbeysay ee kaabta si loo hubiyo in aad raad raac lagu guulaystay.
Daar aad hawada cusub iPad iyo raac tilmaamaha soo socda shaashadda. Dooro luqadda iyo dalka, go'aan ka gaarto in aad awood adeegyada maxaliga ah. Oo u soo jeesan ku shabakadaha WiFi ah.
Marka ay jirtey si aad u iPad (macruufka 9 taageeray), dooran Soo Celinta ka kaabta iCloud ka dibna geli ID Apple iyo sirta ah.
Dooro gurmad ugu dambeeyay ee hore iPad iyo tubbada soo celi . Sug daqiiqad ilaa hawada cusub iPad la soo celiyo ka gurmad ah si guul leh.
Faa'iido: iCloud aad caawisaa gurmad iyo soo celiyo inta badan xogta. Waxay tahay taariikhda soo iibsatay music, bandhigyada TV, filimada, barnaamijyadooda, iyo buugaag (ma isu), sawiro iyo video badbaadiyey ee ku giringiriya Camera ah, meel qalabka, fariimaha, ringtones, mail cod muuqaal ah, screen guriga, Apps xogta iyo si on.
Qasaarooyinka: Waxa loo baahan yahay shabakadaha WiFi deggan si loo hubiyo in gurmad iyo soo celinta hanaanka. Waxay qaadataa waqti badan. Taa ka sii daran, sida warbaahinta ma-iibsaday ka Lugood, iCloud ku guuldareysto inuu gurmad iyo soo celiyo.
Xalka 3. Nuqul xogta jir iPad in iPad hawada 2 la MobileTrans
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad nuqul ka agabka aan u iibsaday inay aad hawada cusub iPad? Waa sahlan tahay haatan. The Wondershare MobileTrans (Win) ama Wondershare MobileTrans u Mac yimaado tahay caawimada. Waxaa xirfad loogu talagalay caawiyay aad ku wareejin xog u dhexeeya laba telefoonada iyo kiniiniyada kasta oo marka ay ordi Android, macruufka ama Symbian (kaliya version Windows taageertaa files iyo ka qalabka Symbian wareejinta). Waxay ku siisaa awood ay ku wareejiso oo dhan music, jadwalka taariikhda, fariimaha, videos, sawiro iyo xiriirada ka iPad in iPad hawada jir ah click hal. Waxoogaa haboon, miyaanay ahayn?
Hoos waxaa ku qoran tilmaan buuxda marka la isticmaalayo version Windows ah. Haddii aad tahay qof user Mac, sidoo kale waxay kuu raaci kari waayay. Iska akhriso on!
Tallaabada 1. Isku labada iPads in computer la Apple USB fiilooyinka
Download iyo gashato kombiyuutarka. Laba-guji xirmo rakibo shaashadda kombiyuutarka si ay u abuurtaan. In uu furmo suuqa hoose, guji Phone in Transfer Phone. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax furmo suuqa kala iibsiga iPad. Labada ah ee iPad iyo iPad hawada jir Connect in kombiyuutarka. Software ayaa lagu ogaan doonaa oo aan u muujiyo in uu furmo this.
Software Tani waa si buuxda u la jaan qaada hawada iPad iyo in ay maamulaan macruufka 9/8/7/6/5 kale iPad.
Tallaabada 2. Nuqul music, video, sawiro, jadwalka taariikhda, iMessages iyo xiriirada ka jir iPad in hawada iPad
Sida aad ka arki, dhammaan macluumaadka ayaa la oggol yahay in ay u gudbiyaan waxay ku qoran yihiin oo laga fiiriyaa u dhexeeya labada iPads. Tag, oo guji Start Copy . Markaas, kala iibsiga jir iPad in iPad xogta hawada bilaabmin. U hubso in midkoodna iPad muuqdey in koorsada oo dhan.
Faa'iido: Labada iibsaday iyo waxyaabaha iibsaday oo aan loo ogol yahay inay u gudbiyaan. Ka sokow, xogta hadda hawada iPad aan la qaadi doonin ka hor xogta on jir iPad waxaa laga keeno. Intaa waxaa dheer, Wax macno ah ma u baahan tahay wax shabakadaha WiFi, iyo hanaanka wareejinta waa mid aad u degdeg ah oo nabdoon.
Qasaarooyinka: software Tani waa ciirsi marka aad rabto in la soo celiyo goobaha, app, xogta app iyo mail cod muuqaal ah.
Daawo video hage ah
Taasi waa dhan oo ku saabsan sida loo si ay hawo cusub iPad wareejiyo xogta laga jir iPad. Dooro habka aad jeceshahay oo isku day ah oo ay leeyihiin.
Ka dib markii ay suuqa kala iibsiga xogta, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u maamusho hawada cusub iPad. The Wondershare TunesGo (Win) ama TunesGo Wondershare (Mac) waa doorasho wanaagsan. Waxaa loo isticmaalaa taageerayaasha Apple si ay u maareeyaan music, filimada, sawiro, podcasts, Lugood U, videos music. TV muujinaysaa, iyo in ka badan oo ku saabsan hawada iPad.
> Resource > Transfer > 3 Siyaabaha kala iibsiga xogta ka soo Old iPad in hawada 2 ama iPad mini iPad 3